Izinkampani zezimoto zifake isandla ukudambisa umonakalo
U-DKT Imtiaz Sooliman weGift of the Givers Foundation emukela amasheke kaR1.5 million ngalinye kuGideon Jansen van Rensburg wakwaHyundai Automotive South Africa noBerenice Francis wakwaMotus Corporation
Fanelesibonge Bengu | April 29, 2022
IZINKAMPANI zezimoto ezahlukene zilule isandla kwabakhahlanyezwe yizikhukhula ezihlasele KwaZulu-Natal nezingxenye ze-Eastern Cape muva nje.
IMotus Corporation nenkampani engaphansi kwayo, iHyundai Automotive South Africa banikele ngoR3 million enhlanganweni ezimele, iGift of the Givers ngoLwesibili egaraji lakwaHyundai eMhlanga.
UGideon Jansen van Rensburg onguMqondisi wakwaHyundai Automotive South Africa KwaZulu-Natal, uthe ngesikhathi bethi bazonikela ngoR1.5 million, inkampani ebaphethe iMotus nayo ithe izokwenza okufanayo.
Uthe bake basebenza neGift of the Givers phambilini futhi bayazi ukuthi imali yabo iphephile.
Emukela isheke umphathi weGift of the Givers, uDkt Imtiaz Sooliman, uthe lizobasiza kakhulu ngoba baningi ababathintayo bexakekile.
Uthe basaqhubeka nokuthungatha abadukile, bahambisa amanzi, amaphasela okudla nokunye.
“Ngo-2020 ngesikhathi kuqala iCovid kwakufanele sihambise ukudla kuhlasele indlala. IMotus neHyundai basinikeza amaveni amabili nebhasi iH1 ukuze ithuthe abantu abahlolayo. UNgqongqoshe wamaPhoyisa wahlolwa yithi, uSiya Kolisi, abadlali bePirates neKaizer Chiefsa nabanye. Ngo-2021 sithole ezinye izimoto futhi nakulo nyaka sathola enye. Le mali nalezi zimoto kwenza kube lula,” kusho uSooliman.
EZINYE zezinto ezinikelwe yiFord Motor Company Isithombe: SITHUNYELWE
IVolkswagen Group South Africa (VWSA) yona inikele ngoR2 million kule nhlangano. Igqugquzele nabasebenzi bayo ukuthi banikele kuyo.
“Inkampani yethu igqugquzela ubunye ngezikhathi zobunzima, ikakhulukazi uma kuyinto ephuthumayo ukuhambisa usizo kubantu abakhahlamezekile nemiphakathi. IGift of the Givers yinhlangano enamava ekuhamnbiseni usizo futhi inabantu abazokwenza isiqiniseko sokuthi usizo luya ngokushesha kubantu abaludinga kakhulu,” kusho uNonkqubela Maliza oyiDirector of Corporate and Government Affairs kwaVWSA.
Udlulise amazwi enduduzo emindenini yabashonile, wafisela abalimele ukululama okusheshayo.
IFord Motor Company nayo ibambisane neGift of the Givers inikele ngezinto zikaR370 000 ezihlanganisa amaphasela okudla, amanzi, izingubo zokulalala nokunye.